स्वाइनफ्लू लाग्दैमा आत्तिनु पर्दैन, उपचार हुन्छ | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता स्वाइनफ्लू लाग्दैमा आत्तिनु पर्दैन, उपचार हुन्छ
on: ११ माघ २०७५, शुक्रबार ०८:४३ अन्तरवार्ता
डा. वासुदेव पाण्डे, निर्देशक, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, टेकु
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, टेकुको तथ्यांक अनुसार २०७५ मङ्सिरदेखि माघ ८ गतेसम्म ६०४ जना बिरामीको परीक्षण गरिएकोमा ३०५ जनालाई एचवानएनवान/एन्फ्लुएन्जा अर्थात् स्वाइनफ्लू प्रमाणित भएको छ । यो अवधिमा उक्त रोगबाट पाँच जनाको मृत्यु भइसकेको समेत तथ्यांकले देखाएको छ । सन् २००९ मा मात्र पत्ता लागेको स्वाइनफ्लू छोटो समयमा महामारीको रूपमा विश्वभरि फैलिएको रोग हो । पछिल्लो समय नेपालमा यस प्रकृतिको रोग पुनः सक्रिय भएको छ । यसै विषयमा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, टेकुका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेसँग आर्थिक अभियानका काशीराम बजगाईंले गरेको कुराकानी :
स्वाइनफ्लू कस्तो प्रकृतिको रोग हो ?
सुँगुरबाट मानिसमा सर्ने यो रोग स्वाइनफ्लू नामले परिचित छ । तर यो रोगको नाम एचवानएनवान ओनाइन प्यान हो । अर्को शब्दमा यसलाई एचवानएनवान वा एन्फ्लुएन्जा मात्र पनि भनिन्छ । सन् २००९ मा मात्र यस प्रकृतिको रोग पत्ता लागेकोमा छोटो समयमा यो विश्वभर फैलिसकेको छ । एन्फ्लुएन्जालाई सामान्य मौसमी रुघाखोकीकै संक्रमणको रूपमा लिन सकिन्छ ।
यो रोग कसरी फैलिन्छ ?
एचवानएनवानमा एच १ देखि १६ सम्म र एन १ देखि ९ सम्म सक्रिय हुन सक्छ । यी दुई भाइरसलाई नै लिएर यसको नाम एचवानएनवान राखिएको हो । एनले शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति पत्ता लगाउँछ र एचले भाइरसलाई शरीरभित्र छिराउने काम गर्छ । रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढी छ भने त यसले असर गर्न सक्दैन । तर जब यो रोगको भाइरस त्योभन्दा शक्तिशाली भएर निस्कन्छ, तब यसले असर पुर्‍याउँछ ।
यसका लक्षण के के हुन् ?
रुघाखोकीकै लक्षण यसमा पनि हुन्छन् । यो रोग लाग्दा उच्च ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, धेरै चिसो महसूस हुने, गलामा समस्या देखिने, टाउको दुख्ने, नाकबाट सिँगान बग्ने, श्वासप्रश्वास छिटो छिटो हुने र समग्र स्वास्थ्य कमजोर हुने जस्ता लक्षण देखा पर्छन् ।
सामान्य रुघाखोकी हो वा एन्फ्लुएन्जा हो भनेर कसरी छुट्ट्याउने ?
हो, रुघाखोकी र यसका लक्षण एउटै हुने हुँदा यी दुईमध्ये कुन हो छुट्ट्याउन गाह्रो पर्छ । यो रोगले शरीरको छातीभन्दा माथिल्लो भागमा असर पुर्‍याउँछ, झट्ट हेर्दा भने रुघाखोकी नै हो कि जस्तो लाग्छ । कतिपय अवस्थामा निमोनिया भनेर उपचार गराउन आएको बिरामीमा पनि यो रोग देखिएको छ । एन्फ्लुएन्जा हो कि होइन भनेर थाहा पाउन त परीक्षण नै गर्नुपर्छ । तर रुघाखोकी सामान्यतया मौसम परिवर्तन हुने बेला र चिसो समयमा प्रायः सबै व्यक्तिमा हुन सक्छ । त्यस्ता सबै व्यक्तिको जाँच गराइरहन सकिन्न । हामीले सय डिग्रीभन्दा बढी ज्वरो आएकालाई यो रोगको परीक्षण गर्ने गरेका छौं । सय डिग्रीभन्दा तल ज्वरो आएको छ भने सिटामोल खाएर आराम गर्नुपर्छ । तर सिटामोल बाहेकका औषधि डाक्टरको सल्लाहविना खानु हुँदैन । झोलिलो खानेकुरा खाने गर्नुपर्छ । तर ज्वरो त्योभन्दा उच्च छ, श्वासप्रश्वास उच्च हुन्छ र लामो समयसम्म कमी आएन भने परामर्श लिइहाल्नुपर्छ । सुलभ सुविधा छ भने त पहिले नै मेडिकल वा अस्पतालमा देखाउँदा झन् राम्रो हुन्छ ।
सय डिग्री ज्वरोभन्दा तलका बिरामीमा यो रोग हुँदैन भन्न खोज्नु भएको हो ?
होइन, यसभन्दा कम ज्वरो आउँदा पनि एन्फ्लुएन्जा हुन सक्छ । तर त्यो सामान्य हुन्छ, असर पु¥याउँदैन । त्यसलाई मौसमी रुघाखोकी नै हो भनेर बुझ्नुपर्‍यो । त्यस्तै ज्वरोबाहेक अन्य लक्षणका पनि सीमितता हुन्छन् ।
यो रोग कुन समयमा बढी सक्रिय हुन्छ ?
चिसो मौसममा, वर्षायाममा, मौसम परिवर्तन हुँदा यसको भाइरस बढी सक्रिय हुन्छ ।
कस्ता प्रकृतिका व्यक्तिलाई यसले छिटो र बढी आक्रमण गर्छ ?
यसले शरीरको प्रतिरक्षा शक्ति कम भएका व्यक्तिमा छिटो आक्रमण गर्छ । वृद्धवृद्धा, बच्चा, क्यान्सर, एचआईभी लगायत विभिन्न रोगका बिरामी व्यक्ति, गर्भवती महिला आदिमा यो रोग छिटो र बढी फैलिने सम्भावना हुन्छ ।
अहिले फेरि एन्फ्लुएन्जा फैलिएको छ भन्ने सुनिन्छ, यो कत्तिको डरलाग्दो हुन्छ ?
अहिले बढी देखिएको छ । यसका दुई कारण छन् । एक त वर्षैैपिच्छे जाडो याममा यसको भाइरस बढी सक्रिय हुन्छ । दोस्रो, अहिले देखिएको यो रोग पहिलेको भन्दा कडा हुन सक्छ । यही डरको कारण पनि जँचाउन आउनेहरू बढेको मेरो अनुमान छ ।
विश्वमा एन्फ्लुएन्जाबाट १ प्रतिशतभन्दा कमको मात्र मृत्यु भएको देखिन्छ । त्यसैले उपचार गरे यसबाट डराउनुपर्दैन । आजसम्मको यस प्रकारको रोग त्यति गम्भीर नभएकोमा यसपालिको कडा खालको हुन सक्छ । यसमा सतर्कता अपनाउनुपर्छ ।
यो रोगका बिरामी जाँच्न कतिपय डाक्टर नै डराएका समाचार पनि आउँछन् नि ?
डाक्टर पेशाका छुट्टाछुट्टै क्षेत्र हुन्छन् । त्यसैले यो विषयका डाक्टरको कमी छ । डाक्टरको धर्म नै बिरामीलाई हेर्ने हो । डाक्टरले आफू पनि सुरक्षित भएर बिरामीको पनि सेवा गर्नुपर्छ ।
यो रोगबाट बच्न के गर्नुपर्छ ?
बच्चा, वृद्ध, गर्भवती महिला, विविध रोगका बिरामीलाई एन्फ्लुएन्जा भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन (खोप) लगाउँदा धेरै राम्रो हुन्छ । यो खोप अरूले पनि लगाउँदा हुन्छ । यस्तो रोग लागेका व्यक्तिसँग घुलमिल हुनु हुँदैन, कम्तीमा १ मिटर जति परै बस्नुपर्छ । अनिवार्य रूपमा सबैले मास्कको प्रयोग गर्ने गर्नुपर्‍यो । यो रोग हावाबाट मात्र नभएर रोगीको संसर्गमा आएका चीजबीज छुँदा पनि सर्न सक्छ । जस्तै– सार्वजनिक सवारीमा चढ्दा, हुलमुल, मेला/महोत्सवमा जाँदा त्यहाँ भएका रोगीबाट यो रोग सर्न सक्छ । बाहिरबाट आएपछि नङसमेत सफा हुनेगरी साबुन पानीले हात धुने गर्नुपर्छ ।
सकभर भीडभाडमा नजानु नै बेश हुन्छ । अर्को कुरा, हामीले सत्कारको रूपमा हात मिलाउने गरेका छौं । तर संक्रमण फैलन सक्ने भएकाले यो राम्रो बानी होइन । सत्कार दर्शाउन नमस्कार गर्न सकिन्छ । यस्तो प्रकृतिको रोग ठीक नहुँदासम्म परिवारका अन्य सदस्यसँग घुलमिल हुनुहुँदैन । हाछ्युँ गर्दा रुमाल लगायत वस्तुको प्रयोग गर्नुपर्छ । यसका लक्षण देखिएमा झोलिलो पदार्थ धेरै खानुका साथै अधिकतम आराम गर्नुपर्छ । यो रोगका कुनै पनि लक्षण देखिएमा सम्बन्धित डाक्टर, विशेषज्ञबाट चेकजाँच गराउनुपर्छ ।
१८ माघ २०७५, शुक्रबार १५:१०